के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ? कसरी इन्स्टाग्राम मार्फत तपाईंको साथीहरूसँग फोटोहरू साझेदारी गर्ने? इन्स्टाग्राम एक सामाजिक नेटवर्क हो जुन हालसालै राम्रो प्रासंगिकता प्राप्त गरेको छ। यो सब भन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक नेटवर्क को एक भएको छ।
अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू दिन पछि दिनहरूमा सामेल हुँदैछन्। विश्वको कुनै पनि ठाउँमा, इन्स्टाग्राम मार्फत, तपाईं सक्नुहुन्छ छविहरू र भिडियोहरू साझा गर्नुहोस् सबैको रमाइलो को लागी। यो जानकारी धेरै विविध छ, र सबैको लागि त्यहाँ केहि छ।
कला र मनोरन्जनको महत्वपूर्ण व्यक्तित्वको साथ पनि अन्तर्क्रिया, राजनीतिको संसारको, अरुहरु मध्ये, नजिक हुँदै गइरहेको छ। थप रूपमा, इन्स्टाग्रामको साथ तपाईं सक्नुहुन्छ अन्य प्रयोगकर्ताले साझेदारी गरेको सामग्रीको मजा लिनुहोस्। कुनै श doubt्का बिना, एउटा उपकरणले तपाईंलाई साझा गर्न अनुमति दिनेछ, तपाईंको साथीहरूसँग, लक्जरी सामग्री।
आउनुहोस्! मसँग सामेल हुनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् इन्स्टाग्राममा फोटो कसरी अपलोड गर्ने। छविहरू मार्फत आफ्ना साथीहरूसँग अद्भुत क्षणहरू साझेदारी गर्न सिक्नुहोस्।
इन्स्टाग्राममा फोटो कसरी अपलोड गर्ने
Para फोटोहरू इंस्टाग्राममा अपलोड गर्नुहोस् तपाईं जहिले पनि उही चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्, तर तपाईं छविहरू र भिडियोहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको इच्छा अनुसार। यो गर्न, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई एप्लिक, फिल्टर, इमोटिकन्स। यसैले तपाईले प्रत्येक छविलाई एक विशिष्ट र व्यक्तिगत स्पर्श दिनुहुन्छ।
इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो तपाईंको मोबाइल उपकरणको माध्यमबाट हो, र कुनै श doubt्का बिना, यो हो आदर्श, सब भन्दा साधारण, सजिलो र व्यावहारिक तरीका.
अन्य मोड पीसी को माध्यम बाट छ तर यो एक अधिक जटिल मोड हो। वास्तवमा हालसालै सम्म तपाई पीसीबाट फोटोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि केही सुधारहरू भएको छ र अनुप्रयोग अपडेटहरू तिनीहरूले यस प्रक्रियालाई सजिलो बनाएका छन्।
जुनसुकै तरिका पनि जुन तपाईं इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईले यति धेरै फोटोहरू साझेदारी गर्ने अवसर नभुल्नुहोस्।
तपाईंको मोबाइल उपकरणबाट फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्
तपाईंको मोबाइल उपकरणबाट इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् गृहपृष्ठ वा समयरेखा धेरै सजिलो छ। तिनीहरू तपाईंको प्रोफाईलमा उपलब्ध हुनेछ जब तपाईं चाहानुहुन्छ। म तपाईंलाई जाँच गर्न मलाई साथमा आमन्त्रित गर्दछु।
1 चरण। अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस्
जब तपाइँ इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग खोल्नुहुन्छ तपाइँले टाइमलाइन फेला पार्नुहुनेछ। स्क्रिनको फेदमा तपाईले पाँच पाउनु हुनेछ प्रतीकहरू। अर्को, म प्रत्येक प्रतीक वर्णन गर्दछ ताकि तपाईं भ्रम नहोस्।
घर: यो बायाँबाट दायाँ पहिलो हो, सानो घरले प्रतिनिधित्व गर्दछ।
खोज्नुहोस्: यो एक आवर्धक ग्लास द्वारा प्रतिनिधित्व दोस्रो हो।
+ सानो वर्गमा लक गरियो। यो तेस्रो हो, र यसको साथ तपाईं फोटो ग्यालरीमा पहुँच गर्नुहुनेछ।
हृदय यो कोठा हो र यससँगै तपाईंले संकेत चाहानुहुन्छ जब तपाईंलाई प्रकाशन मनपर्दछ।
सिल्हूट पुतलीको पाँचौं हो र यसको साथ तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पहुँच गर्नुहुनेछ।
2 चरण। फोटो ग्यालरीमा पहुँच गर्नुहोस्
प्रेस गर्दै आईकन जोसँग + वर्गमा संलग्न छ, तपाई फोटो ग्यालरीमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। त्यहाँ यसले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा भण्डारण गरेका सबै छविहरू देखाउँदछ।
को स्वभाव छविहरूको कालोनुकीय क्रम हुनेछ। यो तपाईं सबैभन्दा भर्खरको छविहरू पहिले हेर्नुहुनेछ। छविहरूको ग्यालरी तल जाँदा तपाईंले सबैभन्दा पुरानो फेला पार्नुहुनेछ।
3 चरण। छवि चयन गर्नुहोस्
एक पटक तपाई छवि अपलोड गर्न निश्चित हुनुहुन्छ तपाई अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले यसलाई छान्नु हुन्छ यो छ निलो छायाँ हुनेछ र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो शीर्षमा ठूलो देखिन्छ।
यस ठूलो छवि अन्तर्गत तपाईले धेरै आईकनहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरू संग तपाईं सक्नुहुन्छ छवि प्रस्तुतीकरण सम्पादन गर्न सुरू गर्नुहोस् वा छविहरू जुन तपाईं अपलोड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
पहिले तपाईले देब्रेपट्टि देख्नुहुनेछ, दुई वर्ग कोष्ठक जस्तै छवि आकार समायोजित गर्नुहोस् पर्दामा। अर्को, बायाँमा सामूहिक रूपमा तपाईले "अनन्तता" को समान आईकन भेट्टाउनुहुनेछ, यससँग तपाइँ छविलाई बुमेरrang्गको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तर बुमेराrang्ग प्रस्तुतीकरण प्रयोग गर्न तपाईंले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।
त्यसो भए, एक वर्ग आइकन देखा पर्छ जुन तीन खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ। यो तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिनिधित्व गर्न को लागी हो एकल छविमा फोटोहरूको संयोजन.
अन्तमा, दुई अतिव्यापन वर्ग को साथ एक आइकन। यो प्रतिनिधित्व गर्दछ कि तपाईं सक्नुहुन्छ एकैचोटि धेरै फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि, यो आइकन चयन गर्नुहोस् र तपाईंले अपलोड गर्न चाहानुभएका प्रत्येक फोटोहरू चयन गर्न सुरू गर्नुहोस्। अधिकतम संख्यामा तपाईले एक पटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ दस फोटो सम्म।
4 चरण। फिल्टरहरू
एक पटक तपाईंले छवि वा छविहरू छनौट गर्नुभयो, तपाईं अघि बढ्नुहुनेछ फिल्टर लागू गर्नुहोस्, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने। तपाईंले अपलोड गर्न लाग्नु भएका तस्बिरहरूलाई यसले विशेष प्रभाव दिन्छ।
त्यहाँ फिल्टर को विभिन्न प्रकार छन् कि तपाइँको छवि सुशोभित र एक अद्वितीय र व्यक्तिगत स्पर्श दिनुहुन्छ। पनि तपाईं र adjust समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रास्ट, बनावट, गर्मी, संतृप्ति, चमक, छाया र फोकस।
कहिले छवि तपाइँले चाहानु भएको रूप अपनाउँछ माथिको दायाँपट्टि रहेको "अर्को" क्लिक गर्नुहोस्।
5 चरण। नयाँ प्रकाशन
Para तपाईंको छवि प्रकाशित गर्नुहोस् टाइमलाइनमा तपाईंले केही अन्तिम समायोजनहरू गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि क्याप्शन लेख्नुहोस्, यो सन्देश हो जुन तपाईंको छविलाई पहिचान गर्दछ। केवल यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, यो प्रकाशन गर्न क्याप्शन राख्न अनिवार्य छैन।
तपाईं सक्नुहुन्छ व्यक्ति ट्याग गर्नुहोस् कि तपाईं चाहानुहुन्छ ताकि तिनीहरूको प्रोफाइलमा उनीहरूसँग फोटो पनि छ।
राख्नुहोस् भौगोलिक स्थान जहाँ फोटो लिइएको थियो, केहि विकल्पहरू गुगल नक्शाले स्वत: प्रस्तुत गर्दछ। एउटा सम्बन्धित छ कि अन्यथा यसलाई लेख्नुहोस्।
यस सेक्सनमा तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, ट्विटर र टम्बलरको साथ छवि सिnch्क्रोनाइज गर्नुहोस्.
अब हो! "सेयर" थिच्नुहोस् र तपाईंको फोटो इन्स्टाग्राम पोष्टको मुख्य पृष्ठमा अपलोड हुनेछ।
फोटोहरू इंस्टाग्राम कथाहरूमा अपलोड गर्नुहोस्
यस इन्स्टाग्राम फिचरले तपाईंलाई फोटोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईंको सम्पर्कहरूको लागि सीमित दृश्यता समय हुनेछ। तस्विरहरु वा भिडियोहरु जुन तपाइँ इंस्टाग्राम कथाहरूमा पोस्ट गर्नुहुन्छ तिनीहरू 24 घण्टा सम्म रहनेछन्।
Para फोटोहरू इंस्टाग्राम कथाहरूमा अपलोड गर्नुहोस् यो धेरै सजिलो छ, मसँग सामेल हुनुहोस् र निम्न चरणहरू सिक्नुहोस्:
प्रविष्ट गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगमा.
आइकन थिच्नुहोस् माथिको बायाँ कुनामा भएको Istagram कथाहरूबाट। योसँग एक छेउमा + प्रतीक छ र बहु ​​रंगीन इन्स्टाग्राम ब्यान्डले घेरिएको छ। विशेष रूपमा जहाँ तपाइँको प्रोफाइल तस्वीर देखा पर्दछ।
क्यामेरा देखा पर्दछ तस्वीर लिनको लागि तयार छ। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने सिधा तपाईंको राज्यमा अपलोड गर्नको लागि फोटो लिनुहोस्।
स्क्रिनको तल बायाँमा तपाईले आफ्नो फोनको फोटो ग्यालरीको आइकन भेट्टाउनुहुनेछ। यसले तपाईंलाई ग्यालरीबाट फोटोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिनेछ.
तपाईले जे पनि विकल्प छनौट गर्नुभयो, जब तपाई यो गर्नुहुन्छ, तपाई स्वचालित रूपमा अर्को चरणमा उन्नत हुनुहुनेछ। यसमा समावेश छ तपाईंले चाहानु भएको सेटिंग्स लागू गर्नुहोस्। त्यसो भए पाठ, इमोटिकन्स र अन्य विवरणहरू थप्नुहोस्।
कसले तपाईंको कथा हेर्छ चयन गर्नुहोस् दिन को यदि यो सबै वा सम्पर्कहरूको विशेष समूहलाई उपलब्ध हुनेछ।
"सेयर" र "भयो" थिच्नुहोस्। तपाईंको फोटो इंस्टाग्राममा अपलोड गरिएको छ, अब 24 घण्टाको लागि उपलब्ध छ।
पीसीबाट फोटोहरू इंस्टाग्राममा अपलोड गर्नुहोस्
इन्स्टाग्रामले अब अनुमति दिन्छ तपाईंको पीसीबाट फोटो र भिडियो फाईलहरू अपलोड गर्नुहोस्। तपाईंलाई केवल एउटा प्रोग्राम चाहिन्छ जसले तपाईंलाई पीसी मोबाइल वा एन्ड्रोइड उपकरण हो भनेर अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ।
केहीले यो कार्यक्षमता वर्णन गर्दछन्, बरु एक इन्स्टाग्राम दोषको रूपमा। सत्य उनको साथमा छ तपाईं केवल फोटोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले भिडियो अपलोड गर्न वा तपाईंले अपलोड गर्ने छविहरूमा धेरै व्यवस्था गर्न अनुमति दिदैन।
यद्यपि कहिलेकाँही यो जान्न आवश्यक हुन्छ कि यो विकल्प उपलब्ध छ, जब तपाईंसँग एक औंलामा एक कम्प्युटर मात्र छ।
इंस्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न केहि सिफारिशहरू
यहाँ केहि सिफारिसहरू छन् ताकि तपाईं आफ्नो फोटोहरू कुनै असुविधा बिना इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुप्रयोग अपडेट राख्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले इन्स्टाग्रामको सबै समाचारहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईंको फोटोहरू अप टु डेट हुन सक्दछन्। फिल्टर, फ्रेम, इत्यादि जारी गर्न सँधै नयाँ चीजहरू छन्।
गुणवत्ता छविहरू अपलोड गर्नुहोस्, इन्स्टाग्राम पोस्टहरूमा रकम कमसेकम हुन्छ, किनकि यो दृश्य लोड कम गर्ने उद्देश्य राख्दछ। त्यो हो, छविहरू गुणवत्ताको नभएसम्म तपाईले कति प्रकाशित गर्नुभयो यो होइन।
सामग्रीको महत्त्व छ, तपाईंले अपलोड गर्नुभएको छविहरू छवि हुन आवश्यक छ जुन तपाईंलाई पहिचान गर्दछ। यसले तपाईंको बीचमा आकर्षण र सम्बन्धको ग्यारेन्टी गर्नेछ अनुयायीहरू.
छविहरूको साथ पाठको संयोजन, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ।
लिन कोसिस गर्नुहोस् विभिन्न प्लेनमा फोटोहरू, त्यसैले तिनीहरू हेर्न अधिक आकर्षक हुनेछ।
फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् विविध सामग्रीको साथ, तपाईले पहिचान गर्नुभयो।
स्क्रिन स्पेसको फाइदा लिनुहोस् र फोटोमा तपाईंले हाइलाइट गर्न चाहानु भएको विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
अवसर बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईंको फोटोहरू अपलोड गर्नु अघि पुनःटच गर्नुहोस्। फिल्टरहरू, परिष्कृत चमक, कन्ट्रास्ट वा शार्पनेसको प्रयोग गर्नुहोस्। साना परिवर्तनहरूले सकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि तपाईं इन्स्टाग्राममा छवि अपलोड गर्ने तरिका सिक्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग पहिले नै सबै निर्देशनहरू छन् यसका लागि सोध्नुहोस् र सजिलो छ।
म आशा गर्दछु कि तपाईंले यो पोष्ट उपयोगी भएको पाउनुभयो कसरी इंस्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्ने। तपाइँको टिप्पणी गर्न नबिर्सनुहोस्।